Izizathu ezi-8 zokuba kutheni kufuneka ufunde malunga nokwahluka kunye nokubandakanywa ngo-2022
Septemba 29, 2021 U-Okpara Francis
Ukwahluka kuthetha ukuba neenkcubeko ezahlukeneyo, imvelaphi kunye neenkolelo kwindawo enye okanye indawo enye, ngelixa ukubandakanywa kuthetha ukubandakanya wonke umntu ngaphandle kocalulo. Ukwahluka kunye nokubandakanywa kubaluleke kakhulu ekuthinteleni nawuphina uluntu ekuthinjweni okanye ukubekelwa bucala ekufumaneni amalungelo abo asisiseko.
Kutheni le nto iyantlukwano kunye nokubandakanywa kuhlala kusisidingo esikhulu?
Kule bhlog, siza kukuxelela ukuba kutheni iyantlukwano kunye nokubandakanywa zibalulekile kwaye ziyimfuneko enkulu, ngakumbi kweli xesha langoku. Izizathu ezimbalwa zokuba zibandakanyeke ngakumbi kwaye zikhuthaze iyantlukwano zidweliswe apha ngezantsi:
Ukusasaza ukwamkelwa kunye nokunyamezelana:
Xa sihlala kwindawo ekwabelwana ngayo apho kuhlala abantu ngaphandle kwabo babelana ngenkcubeko okanye iinkolelo zethu, kubaluleke kakhulu ukuba sinyamezelane kwaye sihloniphane ukuze sihlale ngoxolo.
Njengokuba sikhula kwaye sibona inkqubela phambili kwezemfundo nakwezobuchwephesha kwihlabathi liphela, akukho sizathu sokuba nengqondo ekhethekileyo enokwenzakalisa omnye umntu okanye uluntu.
Kufuneka sisasaze ukwamkeleka nokunyamezelana kuye wonke umntu ngaphandle kokholo lwakhe, isini, ubuzwe, isini, ubuhlanga, njl, ngakumbi ngoncedo lwe iindibano zocweyo zokubandakanya nokubandakanya kumaziko emfundo, useto lokhathalelo lwempilo, nakwiindawo zokusebenza.
Ukwakha ubunye kwiinjongo zoLuntu
Akukho mandla emhlabeni anokutshabalalisa naliphi na ilizwe okanye uluntu ukuba bemi bemanyene kwaye baba yinkxaso enkulu komnye nomnye. Akukho mntu unelungelo lokwenzakalisa okanye lokugrogrisa omnye umntu; ke ngoko, thina njengabantu kufanele ukuba sibe kunye kwaye sibeke ubuntu ngaphezulu kwayo yonke enye into.
Imiba emininzi yezentlalo iyaqhubeka emhlabeni, kwaye ekuphela kwendlela yokuyinqanda kukuma kunye ukuxhasa abo bacinezelweyo kwaye sisebenze ngokubambisana ekupheliseni okanye ukunciphisa ingxaki. Umanyano luyazibuza ukuba lwenziwe ngokufanelekileyo.
Kuyacaphukisa ukubona abantu becalulwa ngokwesini sabo, isinxibo, inkolo, ubuhlanga, ubuhlanga, inkanuko yesini, okanye imeko yezemali. Olu calucalulo lwenza umonakalo osisigxina kunye nonzulu, okukhokelela ekubeni amalungelo abo asisiseko achaphazeleke kwaye abangele imiba emininzi.
Ukwahluka kunye nokubandakanywa kudlala indima enkulu ekubekeni olu calucalulo luphumle kwaye lwakha ikamva elingcono nelamkelekileyo kubo bonke. Oku kubandakanya umvuzo olungileyo, ilungelo lemfundo, ukhathalelo lwempilo olufanelekileyo, nokunye okuninzi.
Ukwaziswa kwamalungelo omnye nomnye
Ukuhlala kwi-2021, akukho sizathu sokungazi amalungelo omnye nomnye. Xa senza okuncinci njengokufumana ulwazi malunga noluntu olungqongileyo, siye sithambekele ekuyikhathaleleni ngakumbi, sidala uvelwano kunye nokuqonda.
Oku kuvumela abantu ukuba babonane ngokudibeneyo kwiimfuno zomnye nomnye kwaye bakhule kunye njengoluntu. Ukuhlala kwii-Es ezintathu, okt, ukulingana, ukulingana, kunye uvelwano, wenza imimangaliso kwilizwe lethu ngokwempilo yengqondo neyasemzimbeni, ukonyusa uqoqosho, kwaye uphakamisa inqanaba lemfundo kwinqanaba likazwelonke.
Ukudala amanye amakhondo emisebenzi kunye namathuba emfundo
Ukwahluka kunye nokubandakanywa kunonxibelelwano olomeleleyo kunye nemisebenzi kunye nezifundo zabantu kwihlabathi liphela. Umzekelo, umntu obhinqileyo oyifaneleyo indima yobunkokeli ufumana ithuba lakhe lokususwa ngokusekelwe kwisini sakhe.
Ngoku, inkampani asebenza kuyo iyabuhlutha ubuchule kunye namava akhe. Khawufane ucinge ukuba uninzi lwabasetyhini abafana naye bavunyelwe ukuba benze konke okusemandleni abo kwindima eyenzelwe bona, iziphumo ziya kumangalisa kwinkampani / umbutho ochaphazelekayo kunye nelizwe abasebenza kulo.
Abantu abaninzi banqatshelwe ngamathuba amangalisayo ngokusekwe kwabo bangabo, kwaye umhlaba uya kuhluthwa umntu onetalente kunye namava ngokusekwe kolu calucalulo. Ukwahluka kunye nokubandakanywa kudala amathuba anjalo kubantu ekwakheni amakhondo emisebenzi yabo kwaye babanike ithuba elilinganayo kwimfundo njengabo bonke abanye.
Ukufumana ukhathalelo lweMpilo oluBandakanyayo
Ngoku ka isibane solwandle, Iipesenti ezingama-19 zoluntu lwe-LGBTQ +, ngakumbi abantu be-transgender, babenqatshelwe ukunakekelwa kwezempilo kwaye bade baphathwa gadalala ngoogqirha / ngabasebenzi bezempilo.
I-blog efanayo inika ingxelo yokuba ngo-2016 nje kuphela, ngaphezulu kwemithetho eyi-175 echasene ne-LBGTQ yapasiswa kumazwe angama-32 ase-US, apho phantse i-10% yabo yayinxulumene nokuthintelwa kwabo ukufikelela kukhathalelo lwempilo nokhuseleko.
Ngaphaya koko, ngokwe-TheUndefeated, umntu om-1 kwaba-5 abamnyama wajongana nocalucalulo kwimeko yezempilo. Ngokwahlukileyo, iipesenti ezingama-37 zabasetyhini abamnyama abanabantwana, i-25% yabasetyhini abamnyama ngokubanzi, kunye ne-15% yamadoda amnyama ajongene nocalucalulo ngokobuhlanga kwimeko yezempilo ngokubanzi.
Ukwahluka kunye nokubandakanywa kudlala indima enkulu ekuqinisekiseni ukuba wonke umntu ufumana ukufikelela kukhathalelo lwempilo olusemgangathweni ngaphandle kocalulo okanye umkhethe.
Ukwakha Uvelwano Phakathi Kubo Bonke
Ukuba akukho enye into, iyantlukwano kunye nokubandakanywa kwakha uvelwano kuye wonke umntu kwaye kuqinisekisa ukuba wonke umntu uphathwa ngokufanelekileyo. Ukwazi umzabalazo kunye nemvelaphi yomnye nomnye kudala ubudlelwane obungcono kunye nobusondeleyo phakathi kwabantu abohlukileyo omnye komnye kodwa befana entliziyweni.
Ukuba novelwano ngumba ophambili wokuba ngumntu, kwaye le yinto eyakha ubuntu ngaphezulu kwako konke. Ukuthanda abantu ngokuchanekileyo ukuba bangobani okanye ukuba bazalwe njani kwaye ubaphathe ngobubele kwenza umhlaba ube yindawo engcono yokuhlala.
Ukufumana ukuqonda okungcono kokuLingana kunye nokuBekwa kakuhle phakathi koLuntu lonke
Ukuba namalungelo alinganayo yinto umntu ngamnye azalwa enayo. Xa ukhuthaza iyantlukwano kwaye usasaza ukubandakanywa, uyazi malunga noluntu oluhlala macala onke kuwe nakuyo yonke indawo emhlabeni.
Oku kukwenza ukuba ubaqonde ngcono kwaye ube negalelo kwimpilo-ntle yabo ngokuba bonwabele amalungelo abo asisiseko. Oku kuyakusasazeka ngokuqinisekileyo phakathi kwabo bonke kwaye sakhe ubudlelwane obunzulu, obunentsingiselo ngakumbi.
Ukuba ngumntu ongcono akukho nzima kwaphela. Into ebalulekileyo kukuba ubukho bakho bunegalelo njani kwimpilo yengqondo nengokwenyama yabantu abakungqongileyo. Ezi zintathu zikhankanywe apha ngasentla zibalulekile ekubeni lonke uluntu luhlalisane ngoxolo ngaphandle kokunyhasha amalungelo namntu.
Ukukhuthaza iyantlukwano kunye nokubandakanywa kuqinisekisiwe ukutsala impumelelo kunye nokuchuma ngelixa ucalucalulo nengcinezelo ziseka isiphithiphithi nosizi emhlabeni.
Post Previous:I-7 yokuGuqulela eziGqwesileyo kunye neeDikshinari zaBafundi
Okulandelayo Post:I-11 yezifundo zeDyunivesithi zasimahla eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe